Waaheen Media Group » 2017 » June » 3
Browse:Home 2017 June 03	Daily Archives: 8:38 am	Guddoomiyaha Waddani Ee Maraykanka Maxamed Aadan Tarbbi Oo Tilmaamay In Wasaaradda Caafimaadka Uu Ku Jiro Khilaaf Huursan
Comments Off on Guddoomiyaha Waddani Ee Maraykanka Maxamed Aadan Tarbbi Oo Tilmaamay In Wasaaradda Caafimaadka Uu Ku Jiro Khilaaf Huursan
Wasaaradda Caafimaadka Soomaalilaan waxay ummadda Soomaalilaan u haysaa shaqo aad i muhiim ugu ah arrimaha bulshada mana aha good siyaasadeed ee waa goob bulshada loogu adeego. 72-kii saacadood ee ugu danbeeyey waxa magaalada Burco ku geeriyooday in ka badan 40-qof oo sida runtii ah la badbaadin karayey noloshooda. Hadalka u baahan in la fasiro bulshaduna ay fahanto waa hadalkii Wasiiru Dawlaha Caafimaadka. Oo u dhignaa: In wasiiru dawluhu magacaabay Isuduwaha Gobolka Saraar muddo bil gudaheedana Wasiirku magacaabay mid kale. Halkaa su’aal sharci ayaa soo galaysa oo ah yaa awood uleh inuu Isuduwe magacaabo ma Wasiirka mise Wasiiru Dawlaha? Waxa kale oo uu Wasiiru Dawluhu sheegay in madaxtooyadu qorshe u samaysay Shuban biyoodka fulintii qorshahaana wuxuu ku eedeeyey Wasiirka oo uu yidhi weydiiya wixii uu qabtay. Waxa kale oo hadalka Wasiiru Dawlaha ka muuqatay inuu jiro xidhiidh la’aan ka dhaxaysa isaga iyo Wasiirka. Haddaba Madaxtooyada Soomaalilaan waxaan ugu baaqayaa in si degdeg ah hoos loogu eego Wasaaradda Caafimaadka iyo hawlaheeda shaqo maadaama ay tahay xaruntuu ugu muhiimsanayd ee adeegga bulshada aynu ka filaynay.
Daawo: Dhowrsonaanta Qofka Muslimka Ah
Comments Off on Daawo: Dhowrsonaanta Qofka Muslimka Ah
Ku soo dhawaada oo ka bogta muuqaalkan kooban ee barnaamijka Midhaha Diintu idiinku talo galay. Wuxuuna ku saabsan yahay dhowrsonaanta qofka muslimka ah. Waxa soo jeedinaya sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil…. Read more »
Wakiilka Somaliland ee Sweden oo warbixin ka soo saaray dadka u safraya Somaliland
Comments Off on Wakiilka Somaliland ee Sweden oo warbixin ka soo saaray dadka u safraya Somaliland
xwk/slms/03-2017 Stockholm 2/6-2017 Ku: Dhamaan dhoofayaasha u socodaalaya Somaliland sannadkan. Ujeeddo,: Warbixin Dhamaan dadka u socdaalaya Somaliland waxa aanu la socodsiinaynaa arimahan hoos ku qoran. – Dadka ku dhashay Somalia,… Read more »
Xisbiga WADDANI Oo Gurmad Ka Geysatay La Tacaaliday Xanuunka Shuban Biyoodka ee Burco
Comments Off on Xisbiga WADDANI Oo Gurmad Ka Geysatay La Tacaaliday Xanuunka Shuban Biyoodka ee Burco
Burco (Waaheen) Wefti ka tirsan Xisbiga Mucaaradaka ah ee WADDANI Oo uu hoggaaminayo Guddoomiyaha ku meel gaadhka ah ee Xisbiga WADDANI Md C/qaadir Jirde, ayaa deeq- daawooyin ah gaadhsiyey Cisbitaalka… Read more »
Daawo: Qaybo kamid ah Sanaag oo lagu arkay Shuban Biyood
Comments Off on Daawo: Qaybo kamid ah Sanaag oo lagu arkay Shuban Biyood